Xuska dhalashada Nebi Max’ed NNKH oo lagu qabtay Baladweyne (SAWIRRO) | Sagal Radio Services
Xuska dhalashada Nebi Max’ed NNKH oo lagu qabtay Baladweyne (SAWIRRO)
Munaasabad ballaaran oo dhalashada Nebi Muxamed NNKH lagu maamuusayay oo ay ka qeyb-galeen culima’udiin iyo qeybaha bulshada ayaa Axaddii shalay lagu qabtay magaalada Beledweyne.
Munaasabada oo aheyd tii ugu ballaarneyd oo sanadihii ugu danbeeyay lagu qabto gobolka Hiiraan ayaa culima’udiinkii ka soo qeyb-gallay waxaa ay socod dheer ku soo mareen wadada halbowlaha u ah magaalada, iyaga oo markii danbe isugu soo ururay garoonka kubada cagta ee xaafadda Xaawo-Taako.
Dadkii ka soo qeyb-gallay munaasabada ayaa siweyn ula dhacay sida loosoo agaasamay xuska dhalashada Nabigeenna Muxamed NNKH, waxaana xuska lagu soo bandhigay qasiidooyin Nabbi amaan ah oo ay ka qeyb-galleen dhallinyaro aad u da’yar.
Dhamaan culimadii ka qeyb-gashay munaasabada ayaa halkaa ka jeediyay muxaadaro u badneyd taariikhdii Nabbigeena Max’ed NNKH iyo sidda looga baahan yahay guud ahaanba umadda muslimka ah meel kasta oo ay joogaan nooleynta sunnada nabiga.
“Maanta waa maalin ku weyn dhamaan umadda muslimka ah meel kasta oo ay joogaan, waa maalintii uu dhashay Nabbigeen Max’ed NNKH, waa maalin in la xusuusto mudan, la is baraarujiyo mudan, waxaana isku dardarmeynaa dhamaanteen nooleynta sunnada Nabiga,” ayuu yiri Sh. C/raxmaan Max’ed Cali oo ah guddoomiyaha maxkamada degmada Beledweyne.
Gobollada bartamaha Soomaaliya ayaa siddoo kale waxaa ka soconaya munaasabad lagu weyneynayo dhalashada Nabiga, gaar ahaan waxaa ka mid ah degmooyinka sidda weyn looga xusayo Guri-ceel, Xeraale iyo deegaanno kale oo ka tirsan gobolka Galguduud.
Tags Dhalashada Nabiga NNKH Xuska